SkAdNetwork? Privacy Sandbox? ငါ MD5s နှင့်အတူရပ် Martech Zone
စက်တင်ဘာလထုတ် iOS 2020 ဖြန့်ချိမှုအရ IDFA သည်စားသုံးသူများအတွက် opt-in feature တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းအက်ပဲလ်၏ဇွန်လ ၂၀၀ တွင်ကြေငြာခဲ့သည်။ 80 ဘီလီယံကြော်ငြာစက်မှုလုပ်ငန်း, ရှာရန်စိတ်ပြင်းထန်ခြင်းသို့စျေးကွက်ရှာဖွေရေး လာမယ့်အကောင်းဆုံးအရာ။ အခု ၂ လကျော်သွားပြီ၊ ငါတို့ခေါင်းကိုကုပ်နေတုန်းပဲ။
မကြာသေးမီကအတူ အများကြီးလိုအပ်နေရွှေ့ဆိုင်း ၂၀၂၁ ခုနှစ်အထိကျွန်ုပ်တို့သည်စက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေဖြင့်သုံးစွဲသူများ၏အချက်အလက်များကိုစုဆောင်းရန်အတွက်ရွှေစံအသစ်တစ်ခုကိုရှာဖွေရန်ဤအချိန်ကိုထိရောက်စွာအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။ ထို့အပြင် granular ပစ်မှတ်နိုင်စွမ်းဖြစ်ခြင်းနေစဉ် privacy ကိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုများအမှာစကားသော။ ထိုအခါငါအသစ်သောစံသစ် MD2021 အီးမေးလ်ကို hash ကြောင်းဘုတ်အဖွဲ့တစ်လျှောက်လုံး, ယုံကြည်ပါတယ်။
MD5 message-digest algorithm သည် 128-bit hash value ကိုထုတ်လုပ်သည့်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသော hash function ဖြစ်သည်။
စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်များစွာသောအဘို့အတောင်ပံအတွက်စောင့်ဆိုင်းနေကြသည် Apple ရဲ့ SkAdNetwork နှင့် ဂူဂဲလ်ခရုမ်း၏သီးသန့်သန့်ရှင်းသောအရာ, ဒါပေမယ့်နှစ် ဦး စလုံးမြောက်မြားစွာအားနည်းချက်များရှိသည်။ သူတို့နှစ် ဦး စလုံးသည်ပွင့်လင်းသောကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးကိုတားဆီးပြီး၎င်းတို့သည်ပလက်ဖောင်းများကပိုင်ဆိုင်ပြီးလည်ပတ်နေသောဂေဟစနစ်ဖြစ်သည် အကယ်၍ စက်မှုလုပ်ငန်းသည်ဤကြော်ငြာအခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့်ပြန်လည်ကိုက်ညီပါကဤနည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးများသည်အခြားပိုမိုပွင့်လင်းသောစံသတ်မှတ်ချက်မရရှိလျှင်စက်မှုလုပ်ငန်းတိုးတက်မှုကိုပိုမိုလက်ဝါးကြီးအုပ်။ တားဆီးနိုင်လိမ့်မည်။
SKAdNetwork သည် privacy ကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နိုင်သော mobile install attribution အတွက်မူဘောင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူ၏အမှတ်အသားကိုမထိခိုက်စေဘဲ App install campaign campaigns (CPI) ပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းကိုတိုင်းတာရန်ရည်ရွယ်သည်။
ထို့အပြင်ဤစနစ်များသည်ပစ်မှတ်အတွက်အကြီးမားဆုံးသောတန်ဖိုးကိုဖြည့်စွက်သည် - real-time data ။ အချက်အလက်များကိုကြေငြာပြီးနောက် ၂၄ မှ ၄၈ နာရီအကြား၌ကြော်ငြာခြင်းကိုပေးပို့သောကြောင့်ကြော်ငြာရှင်များသည်စျေးကွက်ရှိသည့်အချိန်တွင်သုံးစွဲသူများကိုပစ်မှတ်ထားနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ဒေတာကိုယ်နှိုက်၏အသုံးဝင်မှု။
ဤအားနည်းချက်များအပြင်ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီနှစ်ခုကိုသာဤသီးသန့်တည်ရှိမှုနှင့်သက်ဆိုင်သောအချက်အလက်အားလုံးကိုထိန်းချုပ်ခွင့်ပြုခြင်း၏မူလအန္တရာယ်များကိုကျွန်ုပ်တို့လျစ်လျူမရှုသင့်ပါ။ ဒီအကြောင်းပြချက်တစ်ခုတည်းက Apple နဲ့ Google တို့မှအဆိုပြုထားသောဖြေရှင်းနည်းများကိုလက်ခံခြင်းမပြုမီစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ခဏတာရပ်သင့်သည်။
MD5 များသည် hexadecimal strings များဖြစ်သော hashing algorithm ကိုဖြတ်သန်းသွားသောအီးမေးလ်လိပ်စာမှအသွင်ပြောင်းထားသောကြောင့် system တစ်ခုလုံးသည်အထိခိုက်မခံသောစားသုံးသူအချက်အလက်များကိုတစ်လမ်းချင်းစီသို့ ပြန်၍ မရနိုင်ပါ။ ထိုရည်ရွယ်ချက်အရ၎င်းသည်လုံခြုံမှုကိုအဓိကထားသောအချက်အလက်များဖြစ်ပြီးအမည်မသိသောအသုံးပြုသူပရိုဖိုင်းများကိုဖန်တီးရန်ဒေတာများကိုလုံခြုံစွာချိတ်ဆက်နိုင်သော်လည်းအသေးစိတ်အဆင့်တွင်ကြော်ငြာများကိုပစ်မှတ်ထားနိုင်သည်။
သုံးစွဲသူများသည်ယေဘူယျအားဖြင့်တူညီသောမူလအီးမေးလ်လိပ်စာကိုနှစ်ပေါင်းများစွာထိန်းသိမ်းထားသောကြောင့် MD5 များတွင်ဒစ်ဂျစ်တယ်အပြုအမူနှင့်လှုပ်ရှားမှုကြီးမားသောမြေပုံရှိသည်။ ထို့ကြောင့်မှတ်ပုံတင်ထားသောအသုံးပြုသူအခြေစိုက်သည့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်၊ အက်ပလီကေးရှင်းသို့မဟုတ်ပိုမိုခိုင်မာသောအချက်အလက်များ၊ ကြော်ငြာများမှအကျိုးခံစားရလိမ့်မည် ဆက်ဆံရေးနှင့်ငွေရှာခြင်း။
အထူးသဖြင့်အိုင်ပီလိပ်စာအချက်အလက်နှင့် တွဲဖက်၍ MD5s သည်အချိန်စမ်းသပ်ပြီးသက်သေပြထားသောဖြေရှင်းချက်သည်အနာဂတ်တွင် MAIDs မပါဘဲရှေ့သို့ရှေ့သို့တိုးတက်စေရန်အထိရောက်ဆုံးသောကွန်ယက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ MD5s များနှင့်အတူကြော်ငြာသူများသည်အသုံးပြုသူများမှတ်ပုံတင်ထားသောအွန်လိုင်းလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများရှိအလားအလာရှိသောစားသုံးသူများထံရောက်ရှိလာနိုင်ပြီး၎င်းသည်အသုံးဝင်သော၊ အမည်မသိသောပရိုဖိုင်းများကိုတည်ဆောက်ရန်အတွက်ထိုအချက်အလက်များကိုသူတို့နှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။ အကယ်၍ အစုလိုက်အပြုံလိုက်မွေးစားခြင်းခံရလျှင်အွန်လိုင်းလူမှုအသိုင်းအဝိုင်း၏တန်ဖိုးသည်သိသိသာသာတက်သွားလိမ့်မည်။
မိုဘိုင်းကြော်ငြာနံပါတ်များသို့မဟုတ်မိုဘိုင်းကြော်ငြာနံပါတ်များ - အသုံးပြုသူရဲ့သီးခြား၊ ပြန်လည်နေရာချထားနိုင်မှု၊ သုံးစွဲသူရဲ့စမတ်ဖုန်းစက်ပစ္စည်းနဲ့ဆက်စပ်ပြီးသူတို့ရဲ့မိုဘိုင်းလည်ပတ်မှုစနစ်ကထောက်ပံ့ပေးတဲ့သုံးစွဲသူအတွက်သီးသန့်၊ developer များနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေသူများသည်သူတို့၏ app ကိုမည်သူအသုံးပြုနေသည်ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရန် MAIDs ကကူညီသည်။
အမှန်တရားကတော့မရှိဘူး လာမယ့်အကောင်းဆုံးအရာအနည်းဆုံးတော့မဟုတ်သေးပါ။ သို့သော် MD5 သည်ဂူဂဲလ် (သို့) Apple ၏မြေပေါ်တွင်အခြေချရန်ပိုမိုပျော့ပြောင်းပြီးနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သီးသန့်တည်ရှိမှုလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်တံခါးပိတ်စနစ်တစ်ခုအတွက်အခြေမခံသင့်ပါ။ စားသုံးသူဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အထိခိုက်မခံသောသတင်းအချက်အလက်များကိုကာကွယ်ရန်မှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်သော်လည်းသုံးစွဲသူများ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးရန်နှင့်၎င်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးရန်လည်းလိုအပ်သည်။ ပွင့်လင်းသောစနစ်အသစ်ကိုမဖန်တီးမှီအထိကျွန်ုပ်တို့အလုပ်လုပ်သောအရာများနှင့်အတူကပ်ကြပါစို့။
Tags: ပန်းသီးcpiအီးမေးလ် hashgooglegoogle chromehashidfaiOS 14md5md5 hashမိုဘိုင်းကြော်ငြာအိုင်ဒီမိုဘိုင်းကြော်ငြာမိုဘိုင်းကြော်ငြာprivacy sandboxSKAdNetwork
David Finkelstein သည်အင်တာနက်ရှေ့ဆောင်၊ နည်းပညာဆိုင်ရာစွန့် ဦး တီထွင်သူဖြစ်ပြီး ၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင်အင်တာနက်၏အစောဆုံးကာလများမှစတင်ခဲ့သောအင်တာနက်ကုမ္ပဏီများစွာကိုတည်ထောင်သူဖြစ်သည်။ သူသည်လက်ရှိတွင် Co- တည်ထောင်သူနှင့်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်သည်။ BDEXယူအက်စ်တွင်ပထမဆုံးနှင့်အကြီးဆုံးစားသုံးသူအချက်အလက်ဖလှယ်ရေးပလက်ဖောင်း